၂ခုလုံးဖတ်တယ်နော်.ခုမှ မန့်တာ မနေ့က ထိ မအားလို့..ဒီနေ့တောင် ညမှ အားပီး နှပ်နေတာ
သေချာရေးထားတာဘဲ။ ဖတ်သွားပါတယ်။ နားလည်သလောက်ပေါ့။
မမရေ.. အားကျတယ်။ မမလိုလုပ်နိုင်သေးဘူး
မ ရဲ့ ဒိုင်ယာရီစာမျက်နှာလေးတွေက အဖြူရောင်လေးတွေနော်… မျှော်နေမယ် မ ရေ…
အမက ကျွန်တော့်စီနီယာ စစ်စစ်ကြီးပါလား။ ကျွန်တော်လည်း electronics ပဲ။ နောက်ဆုံးအသုတ်ပေါ့ဗျာ။ ဂျူလိုင်နဲ့ တစ်နှစ်တည်းပါပဲ။ “Draftwoman ” အဲဒီစာလုံးက အခုမှ ကြားဖူးတာ။ တကယ်ပါ။
As long as u satisfy with u r work for Survival u should be happy.Keep it up.
့မြတ်နိုး၊ မမKOM၊ ဖတ်ပေးတာ ကျေးဇူးပါနော်။
KPZ ရေ ဒီလိုမပြောပါနဲ့ အစ်မကို မြန်မြန်ကြီးသာ ကျော်တက်သွားစမ်းပါ။ အားပေးနေတယ်။ (အခုလည်း ရှေ့မရောက်သေးဘူးလို့ ပြောတာ မဟုတ်ဘူးနော်။) Count on you.
တန်ခူးရေ ဒီက ရောင်စုံမမပါ...ဒီတင်ရပ်.. ဆက်မဆိုနဲ့တော့။
တောင်ငူသားရေ ဘုရားစူး အီလက်ထရွန်နစ် ပါ။
Draftswoman က ကိုယ့်ဖာကိုယ် မျက်နှာလိုက်ပြီး